Dib U Milicsiga Taariikhda; Kee Baa Halis Badan Jaajuuskii Shalay Iyo Kan Maanta?!!! – IFIYE
Dib U Milicsiga Taariikhda; Kee Baa Halis Badan Jaajuuskii Shalay Iyo Kan Maanta?!!!
Waa jaajuus! Ethiopia ayaa soo dirsatay, u adeegga Waxaa hadda bedelay waa basaaska Imaaraadka Carabta! Tan iyo markii ay Soomaaliya noqotay dal madax banaan adeegsiga erayga ‘Jaajuus’ waxa uu ahaa mid aad ugu badan dadka Soomaaliyeed dowlad ilaa iyo bulsho. Waqtiga wuu is bedelayey balse cadawgu mar walba mid ayuu ahaa ilaa laga soo gaaray 2017! Waxaa soo kordhay sida ay qabaan qaar ka mida bulshada cadaw kale oo aa marnaba liiska ugu jirin umadda Soomaaliyeed. Qormadan waxaan ku soo bandhigi doonaa arin taariikhi ah oo dalka ka dhacday 1964 balse marka hore waa maxay Jaajuus ama basaas?
MICNAHA JAAJUUS/BASAAS EE QAAMUUSKA?
Micnihiisa siyaasiga ah….
-Waa qof lab ama dhaddig ah oo ay dowlad u shaqaaleysiiso si uu xog qarsoodi ah iyo macluumaad uga keeno dal kale, badanaa dalku waa mid cadawtinmo kala dhexeyso meelaha laga abaarana waa militariga.
-Waa qof si qarsoodi ah ugu kuur gala dhaq dhaqaaqa qof kale…
Maxaa dhacay 1964?
Dalka xilligaas waxa uu xorriyaddiisa haystay muddo afar sano ah waxaana bilow ahaa yegleeliddii haayadda sirdoonka qaranka.
Haayadda sirdoonka qaranka oo uu madax ka ahaa General Jaamac Maxamed Qaalib ayaa ka shakisay dhaq dhaqaaqa safaaradda Itoobiya waxa ayna haayaddu go’aansatay si dhaw in ay ula socoto.
Xilligaas waxaa iyadana dalka ku soo biirtay haayadda Isgaarsiinta dalka oo curdun ahayd, General Jaamac Maxamed Qaalib waxa uu u tagay nin dhallinyaro ahaa oo madax ka ahaa Isgaarsiinta dalka waxa uuna ka codsaday in ay tallaashaan safaaradda Xabashida si ay ula socdaan dhaq dhaqaaqooda isaga oo u sheegay in tuhun galay, hase ahaatee, ninki dhallinyarada ahaa waxa uu ku wargaliyey General Jaamac Maxamed Qaalib in uusan awoodin arintaas oo uu amar ka soo qaato wasiirka boostada iyo isgaarsiinta.
General Jaamac Maxamed Qaalib wuu garowsaday falcelintii ninka dhallinyarada ahaa waxa uu toos u abbaaray wasiirkii xilligaas ee Boostada iyo Igaarsiinta oo ahaa Maxamuud Cabdinuur Juujo. Arintii markuu Jaamac Qaakib wasiirka u bandhigay wuu naxay oo waxa uu mooday in ujeedku yahay dhaggeysiga madaxda dalka balse General-ka ayaa ku qanciyey in arinku sidaas ahayn ee laga shakiyey safaaradda Xabashida, maadama Wasiirku ahaa nin wadani ah wuu ogolaaday in haayadda sirdoonka qaranka loo fasaxo waxa ay dooneyso waxa uuna wacay ninkii dhallinyarada ahaa Jaamac oo la jooga waxa uuna ku yiri “Jaamac la shaqee”.
Waa la tallaalay safaaraddii Xabashida, wax walba oo ay ku hadlaan waa la keydin jiray waxaana la dhageysan jiray maqribka kaddib oo ay shaqaalaha safaaradda ka tagaan xarunta.
Maxaa ka soo baxay haddaba?
Waxaa la ogaaday in 7 qof ay basaas u ahaayeen safaaradda Xabishada oo kala ahaa sida soo socta; 7 qof waxa ay ka tirsanaayeen ciidamada qalabka sida oo ay 4 ka mida ahaayeen militariga, 3 waxa ay ka mid ahaayeen haayadda sirdoonka, 1 qof waxa uu ka tirsanaa wasaaradda arimaha dibadda , qofka kale waxa ay ahayd haweeney ka tirsaneyd bulshada rayidka ah.
Maxaa laga yeelay basaasyadaas?
Toddobadiiba waa la qab qabtay waxaana loo taxaabay xabsiga balse waxaa ku adkaatay dowladda sidii lagu xukumi lahaa maadama aan maxkamad la horkeeni Karin.
Sababta aan loo horkeeni waayey maxkamadda waxa ay ahayd in aan lagu caddeyn Karin falkii basaasnimo ee ay hayeen maadama safaaradaha dalka jooga ay leeyihiin dhawrsanaan (Immunity) oo aan la dhaggeysan Karin taasina iskuma caddeyn Karin dowladda.
Taas oo ay jirto, sida aan kor ku soo xusay in hadda erayga ugu badan ee aan adeegsanno yahay JAAJUUS taariikhduna caddeysay in ay waligood jireen su’aasha mudan in la’isweydiiyo ayaa ah Jaajuuskii hore in kan maanta kee HALIS badan? Jawaabaha idinka ayaan idiin dhaafay….Ilaahay cadawga hana qabto.
Sheekadan waxaan ka soo xigtay General Jaamac Maxamed Qaalib (Oo xilliga arintani dhaceyso ahaa madaxa sirdoonka qaranka( hadana ah barahayga sooyaalka siyaasadda Soomaaliya .
W/Q: Maxamed Muse Maxamed (Max’ed Kaafi)